Puntland Archives - Page 74 of 89 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 14, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Xaalada magaalada Gaalkacyo ayaa maanta oo Jimce ah dagan kadib dagaalo culus oo shalay oo Khamiis ahayd dhacay. Dagaalkii shalay oo u dhaxeeyay ciidamada dowlada Puntland iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa ka dhacay […]
October 13, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Puntland ayaa kala wareegay maleeshiyada Galmudug meelo badan oo kuyaala qaybta koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, sida uu sheegay saraakaal dowlada ah. Sarkaal kamid ah ciidamada amaanka Puntland oo magaciisa diiday in […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo, maleeshiyada Galmudug ayaa madaafiic badan kusoo riday xaafada Garsoor ee Gaalkacyo,Puntland, iyaga oo ka jawaabaya weerarka, ciidamada Puntland ayaa ku ganay madaafiic dhanka Galmudug. Sida […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo kamid ah waxa loogu yeero ciidamada qaranka Soomaaliya kuwaasoo ka qaybgalay dagaalkii uu dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ee ka dhacay Gaalkacyo, ayaa hubkoodii dhigay waxayna isku soo dhiibeen […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobabkii Dayrta ayaa maanta oo Arbaco ah ka curtay gobolada Puntland iyadoo lagu jiray xilli abaar ah oo kulul. Roobka ayaa ka da’ay deegaano kuyaala gobolada Bari, Karkaar iyo Nugaal, sida ay […]
Garowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in Turkigu uusan wax shaqo ah oo la tabaan karo ka qaban gobolada Puntland tan iyo markii uu yimid Soomaaliya sanadkii 2011-kii. “Turkigu in badan [...]